Araara argadhuu? Waaqayyo biraa akkamittan araara argadha?
Eeyyee inni salphaadha! Araara Waaqayyo biraa argachuu hin dandeessu. Araara kee Waaqayyo biraatiif umaa kaffaluu hin dandeessu. Fudhachuu duwwaa malee, amantiidhaan, karaa araaraa fi ayyaana Waaqayyootiin. Yoo akka fayyisaa dhuunfaa keetiitti Yesuus Kiristoositti amanuu barbaadde, cubbuu keetiifis Waaqayyo biraa araara argachuu barbaadde, kunoo kadhata kana kadhachuu dandeessa. Jechuun kadhannaan kun yookiin kadhannaan gosti kami iyyuu si hin fayyisu. Kadhatni kun karaa ati amantii kee Waaqayyo irratti qabdu itti agarsiiftu fi araara siif qopheessuu isattii isa galateeffattudha. “Waaqayyo, ani sirratti akkan cubbuu hojjedhe fi adabbiin akka naaf ta’u nan beeka. Garuu Yesuus Kiristoos adabbii anaaf ta’u fudhateera kanaaf karaa isatti amantii qabuun araara argachuu nan danda’a. fayyinaaf amantii koo sirrattan godhadha. Ayyaana kee fi namaaf dhiisuu kee dinqisiisaadhaaf sin galateeffadha! Ameen!”